Sunada Wadaa’ifteeda/Hawsheeda-Q1aad | U adeeg Xadiith-ka Rasuulka
Sunadu Hawshee ayay qabataa?
Waxaan wada ognahay dhamaanteen inagana qarsoonayn in Qur’aanku yahay hadalkii Allah subxanahu watacalaa uu ku soo dejiyay Rasuulkiisa Muxammed sallalahu calayhi wasallam, sidoo kalena u xilsaaray inuu u cadeeyo adoomaha Alle muraadka Qur’aanka iyo ujeedooyinkiisa .
Allah subxanahu watacalaa wuxuu ku leeyahay Ayadan:
( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ) Macnaha aayada (waxaan kugu soo dejinay yacni Rasuulka salalahu calayhi wasalam Qur’aanka si aad ugu cadeyso dadka waxa loo soo dejiyay ) Surat Naxl. Halkaa waxaa inooga cad in quranka karimka ah uu ku yimaado si duuduub ah kadibna uu Rasuulka (salalahu calayhi wasalim) inoo kala dhigdhigo macnahaas duuduuban. Hadii ay tahay cibaado, mucaamalo, axkaam, iwm. Hadaba waxaan is waydiin karnaa maxay tahay howsha Sunnada? ama maxay qabataa Sunnadu?
Jawaabtu waxaa weeye : Sunada Hawsheedu waa inay cadeyso xukum ku yimid Qur’aanka ama inay fasirto wuxuu Qur’aanku si duuduub ah ama si guud u tilmaamay/ sheegay ka dibna cadeyn iyo tafaasiil ka bixiso. Hadaba Hadalkoo kooban waxaan odhan karnaa Sunadu waa Tarjumaankii Qur’aanka ..
Waxaa jira qaabab badan oo ay Sunadu u tarjumto ama u macneyso Qur’aanka. Hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan tilmaami doonaa qaar kamid ah si aan u ogaano maxay tahay shaqada iyo howsha sunadu. Sidoo kale si aan u ogaano sunada muhiimadeeda, iyo inay tahay dhaxalkii labaad iyo udub dhexaadka diinteena. Iyada iyo Qur’aankana aan la kala sooci karin, qofkii diida si ula kac ahna uu gaaloobayo (walciyaadu bilaah) .
Sunadu waxay cadeysaa xukum uu Qur’aanku si guud inoo faray. Tusaale:
Allah subxanahu watacalaa markuu leeyahay (salaada ooga zakadana bixiya. Surat Baqarah 43) aayadu ma sheegin mana cadeyn inta rakcadood ee salaadu tahay, xiligeeda, shuruudeeda,arkaanteeda iwm. Waxa inoo cadeeyay waxasoo dhan waa sunada suuban.
Sunadu waxay cadeysaa madmadoow ama si kale in loo fahmo aayadaha qaar. Tusaale:
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. Saxaabi ka mida saxaabadii Rasuulka (salalahu calayhi wasalam) ayaa u fahmay aayadan si ka duwan siduu Allah swt ula jeeday. Wuxuu u fahmay saxaabigu in laga wado in dun madoow iyo mid cad inta la soo qaato la eegayo. Taasna Rasuulkaa (salalahu callayhi wasalam) u cadeeyay inaan sidaa loola jeedin ee loola jeedo madowga habeenkii iyo iftiinka maalintii kana shaafiyay fahamkiisii qaloocnaa.
Sunadu waxuu Qur’aanku idlaaqay ayay soo koobtaa ama faahfaahisaa. Tusaale:
Aayda oranaysa ( kan wax xada iyo tan wax xadda gooya gacmahooda ) aayadu waxay tilmaamtay goynta gacmahooda laakin ma sheegin ilaa xagee la goynayaa. Waxasase noo cadeeyay Sunada daahirka ah.
Sunadu waxay cadeysaa macnaha erayada Qur’aanka qaarkood iyo waxa loola jeedo . Tusaale:
Aayada oranaysa ( kuwa Allah swt rumeeyay ee iimaankoodana aan ku dheehin dulmi kuwaasi waxay leeyihiin amni waana kuwa hanuunsan . Surat Ancaam 83) . Saxaabadii way murugoodeen markeey ayadaan maqleen, waxayna yiraahdeen Rasuulkii Alloow waa keenee kaan naftiisa dulmin?. Asxaabtu erayga “dulmi” ayay sidiisa ku qaateen, balse Ilaahay swt sidaa kamuu wadin.. Rasuulka (salalahu calayhi wasalam) ayaa u micneeyay oo yidhi ” Dhulmiga uu Ilaahay sheegayo waa shirkiga”. Siduu Adoonkii wanaagsanaa ee la odhan jiray Luqmaan uu ku sheegay Surat Luqmaan . Markuu wiilkiisa la dardaarmayay ayuu yidhi ” Shirkigu waa dhulmi weyn”
from → Duruus Yaryar Cilmul Xadiith, Sunadda wadaa'ifteeda
← Al Bayquuniyah Sheekh Bashiir Shiil
Taariikhda Sheekh Nuur Qawwi oo gaaban →